पल शाहको नयाँ फिल्मको गीत ! – plus977.net
पल शाहको नयाँ फिल्मको गीत !
भाद्र ३० गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको पल शाह स्टारर फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’को तेस्रो रोमान्टिक गीत रिलिज भएको छ । राजधानीमा आइतवार एक कार्यक्रमका बिच फिल्ममा समावेश ‘जब जब तिम्रो साथ’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतको भिडियोमा पल शाह र आँचल शर्मा फिचरिङ छन् । गीतमा अञ्जु पन्त र सुरेश लामाको स्वर रहेको छ भने शब्द-संगीत अर्जुन पाखरेलको सुन्न सकिन्छ ।
नितिन चन्दको निर्देशन र एन्ड्रियु पौडेलको निर्माणमा तयार भएको यो फिल्ममा पल शाह, आँचल शर्मा, विकास जोशी, जैन कुँवर, सन्तोष शिलवाल गिरीको मुख्य भूमिका छ । यसअघि पल र आँचलले फिल्म ‘नाई नभन्नू ल ४’ मा अभिनय गरेका थिए ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ हिट भएपछि पल अभिनित तेस्रो फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’ अहिले प्रतिक्षित बनेको छ । फिल्ममा जोनीको भूमिकामा रहेका पललाई नितिनले एंग्री योङ म्यानका रूपमा देखाउन खोजेका छन् ।
अनमोल र केकी ‘बेष्ट एक्टर’, छक्का पन्जा ‘उत्कृष्ट चलचित्र’